-एनआरएनए महाधिवेशन: ३.०८% सहभागी, ९२% Nay, ८% Yea, अनि सर्वसम्मत ?
by Krishna KC | Updated: 24 Jan 2021
कृष्ण के सी, अमेरिका/१/२३/२१
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बिशेष महाधिवेशन २०२१ जनवरी २३-२४, २०२१ मा हुँदैछ। जुममा आयोजित महाधिवेशनको उद्घाटन जनवरी २३, २०२१ शनिबार माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले गरे। आफ्नो उद्घाटन मन्तब्यमा मन्त्री ज्ञवालीले सहमत भएका बिषय मात्र छलफलमा ल्याउन सुझाएका थिए।
१. महाधिवेशनमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो उपस्थित भएनन्। संघका टास्कफोर्सले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित हुने डा महतो संघको गत महाधिवेशन २०१९ र यो पटकको बिशेष महाधिवेशनमा पनि उपस्थित भएनन्। पूर्व अध्यक्षहरु मध्ये प्रमुख संरक्षक समेत रहेका शेष घलेले फरक मत लिखित रुपमा पढेर सुनाए। देबमान हिराचनले पनि फरक मत जाहेर गरेका थिए। भवन भट्टले मिश्रित विचार दिएता पनि घुमाउरो रुपमा चुनौती दिए। सो महाधिवेशनमा केवल जीवा लामीछानेले मात्र पक्षमा मन्तब्य दिए।
२. महाधिवेशनमा यो लेख्दै गर्ने व्यक्ति बिशेष रुपमा रिपोर्टिङ्गको लागि आधिकारीक, प्रतिनिधि, मानार्थ परिषद सदस्य पनि हो। तर पनि प्रवेश गराइएको थिएन। यति सम्मकी संघको बिशेष महाधिवेशनमा संघका अन्तराष्ट्रिय परिषद सदस्य, राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्ष, २६०० भन्दा धेरै भनिएका प्रतिनिधि मध्ये २३०० भन्दा धेरै अनुपस्थित थिए। संघको संचार टिम प्रवक्ता बाहेक कसैलाई पनि सहभागी गराइएन। पदाधिकारी र सल्लाहकारलाइ मात्र राखियो भनिएको छ। यस्तैमा पहिलो सत्र समाप्त भयो। ५ घण्टा कुरेपछि बल्ल इन पाइयो जतिबेला जे देखियो त्यो डेटा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
३. दोश्रो सत्रमा बिधानको छलफल थियो। २६०० भन्दा धेरै प्रतिनिधिलाइ बाइपास गरेर दुइजना व्यक्तिले सहमति गरेको भनिएको मस्यौदा प्रस्तुत गरियो। कसैलाई असहमत हुन नपाउने, उत्तर कोरियाको जस्तो आदेश सुनाइयो। महाधिवेशन अनि संस्थाको बिधानको छलफलमा प्रतिनिधिलाइ असहमति राख्ने ठाउँ थिएन। सुन्दा पनि उदेक लाग्दो।
४. यति मात्र होइन च्याट बक्समा लेखेका कमेण्टलाइ केहि पढियो केहि सुनाइएन। QA मा राखिएका मेसेज कुरा त् लेख्ने व्यक्ति आफैले मात्र हेर्न सकिन्थ्यो, अरुले देख्दैनथिए। जे सुकै भए पनि अनिबार्य रुपमा मस्यौदा पास गर्नुपर्ने हुकुमत उपाध्यक्ष मन के सी र पूर्व प्रवक्ता भुषण घिमिरेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ रहनु र नरहनुको कुनै अर्थ थिएन। तर पनि सुन्नको लागि केहि व्यक्तिहरु थिए।
५. उपस्थित मध्ये पनि थुप्रै असहमति थिए, कमेन्ट थिए तर पनि बिचार दिन मौका दिएका थिएनन्। महासचिव डा हेम राज शर्माले चिनेका, जानेका, समर्थक र बोलाइएकालाइ मात्र मौका थिएका थिए। क्यानाडा र अमेरकाका एनसीसी अध्यक्षलाइ अन्तिममा मात्र दिने भनियो। क्यानाडाका अध्यक्ष चिरनजीवि घिमिरे र अमेरिकाका अध्यक्ष सुनिल साहको बिधानमा असहमति थियो। केहि अरु व्यक्तिको पनि असहमति थियो। यो लेख्ने व्यक्तिले पनि १८ बुंदामा असहमति लिखित रुपमा नै जाहेर गरेको थियो। प्रस्तुत बिधानमा बोल्ने मौका नदिएकाले च्याप्ट बक्समा NO VOTE लेखेको पनि थियो। यो व्यक्तिलाई ५ पटक हात उठाउँदा पनि मौका एक मौका दिइएन।त्यसपछि जुममा रहनुको कुनै अर्थ थिएनन। निस्केको तर त्यसलाई पनि अनिबार्य सर्वसम्मत भनियो रे। मलाइ थाहा छैन सर्वसम्मत भनेको के हो तर प्रस्तुत बिधानमा म सहमत थिइन, कसैले कान खोलेर सुने हुन्छ।
६. महाधिवेशनको बिधानमा भएको छलफलको बखत २६०० प्रतिनिधि मध्ये २८६ जना उपस्थित थिए। यो भनेको कुल प्रतिनिधिको ३.८% मात्र हो। त्यसैगरी २८६ जना जम्मा उपस्थित मध्ये ८० जना मात्र प्यानलमा थए। यसको मतलब ८० जनालाई मात्र च्याप्ट बक्समा लेख्ने मौका थियो। बोल्ने मौका त कता हो कता। प्रतिनिधिको ३% उपस्थित अनि उपस्थितमध्ये पनि २७.९७% लाइ मात्र मौका भनेको चाहिँ के होला ? ८० जना मध्ये २५-३० जनाले मात्र विचार राख्न पाए। अर्थात प्रतिनिधिको ०.९६ % ले मात्र विचार राख्न पाए। त्यसमा पनि ५ जना जति मात्र सहमत थिए। बिचार राख्नेको ०.१९% भन्दा पनि कमले समर्थन गरेको बिधान कसरी सर्वसम्मत भयो ?
अन्तमा; महाधिवेशनमा बिचार राख्न नपाएकोले मेरो बिचार यहाँ पोखेको छु। तागत छ भने २६०० प्रतिनिधिलाइ भोट गर्न दिउँ, नतिजाले कति नाङ्गो बनाउँछ त्यो चाहिं हेर्न योग्य होला। अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू चुनौती स्वीकार छ त ?